कोरोना भाइरसबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या ५ हजार नाघ्यो ! – Sagarmatha Online News Portal
कोरोना भाइरसबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या ५ हजार नाघ्यो !
काठमाडौं । विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)बाट ज्यान गुमाउनको संख्या ५ हजार नाघेको छ । यो समाचार तयार पार्दा शुक्रबार अपराह्नसम्म संसारभर ५ हजार ८० जनाको कोरोनाको संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ ।
चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोना भाइरसको प्रकोप यतिबेला १ सय २९ देशमा फैलिसकेको छ । यसबाट हालसम्म १ लाख ३७ हजार ६ सय ७४ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ । हालसम्म सबैभन्दा बढी चीनमा ३ हजार १ सय ७७ जनाको कोरोनाबाट ज्यान गएको छ । त्यसैगरी इटालीमा १ हजार १६, इरानमा ५ सय १४, दक्षिण कोरियामा ७१, स्पेनमा ९० र फ्रान्समा ५१ जनाले कोरोनाको संक्रमणबाट ज्यान गुमाएका छन् ।
पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको उद्गमस्थल चीनमा कोरोनाको संक्रमण दर उल्लेख्य मात्रामा घटेको छ । यससँगै चीन सरकारले कोरोनाको माहामारीबाट मुक्त भएको घोषणा गरिसकेको छ । चीन कोरोनाको माहामारीबाट मुक्त भएको सन्देश दिन चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनफिङले मंगलबार कोरोनाबाट अति प्रभावित वुहान क्षेत्रको भ्रमण गरेका थिए । त्यस्तै दक्षिण कोरियामा पनि यसको प्रभाव कम हुन थालेको छ । चीन र दक्षिण कोरियामा कोरोनाको प्रभाव कम हुँदै गएपनि युरोपेली, अमेरिकी तथा अन्य एसियाली देशहरुमा भने यो तीब्र गतिमा फैलिरहेको छ ।
चीनपछि कोरोनाबाट सबैभन्दा प्रभावित इटालीमा हालसम्म १५ हजार १ सय १३ जनामा संक्रमण भइसकेको छ भने १ हजार १६ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । इटालीमा पछिल्लो २४ घण्टामा मात्रै १ सय ८९ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । कोरोनाबाट जोगिन इटालीले पूरै देशलाई ‘लकडाउन’ गरेर ६ करोड नागरिकलाई सेल्फ क्यारेन्टाइनमा राखेको छ । त्यसैगरी इरानमा ११ हजार ३ सय ६४, दक्षिण कोरियामा ७ हजार ९ सय ७९, स्पेनमा ३ हजार ८ सय ६९, जर्मनीमा ३ हजार ५९, फ्रान्समा २ हजार ८ सय ७६, संयुक्त राज्य अमेरिकामा १ हजार ७ सय ६२ जनामा कोरोनाको संक्रमण देखिएको छ ।
नेपालमा हालसम्म १ जनामा मात्रै कोरोनाको संक्रमणको पुष्टि भएको भएपनि छिमेकी देश भारतमा भने कोरोना संक्रमितको संख्या ७८ पुगिसकेको छ जसमध्ये १ जनाको मृत्यु भएको छ ।